Degso BATTLESHIP APOLLO loogu talagalay Windows
Degso BATTLESHIP APOLLO
Degso BATTLESHIP APOLLO,
BATTLESHIP APOLLO waa ciyaar kombuyuutar cilmiyaysan oo PC ah oo ku dhex gelisa ciyaartoy dagaal ballaaran oo xeeladeysan oo u dhexeeya maraakiibta waaweyn iyo dagaalyahannada taageera.
Ciyaartoydu waxay helaan maraakiib dagaal oo aad u ballaaran, waxay doortaan dagaalyahanno taageero iyo kartiyo kale oo gaar ah si ay u raacaan, oo ay uga qaybgalaan xaalado dagaal oo dhinacyo badan leh. Qaabka All-One, ciyaartoy kastaa wuxuu isku dayaa inuu hubiyo in maraakiibtooda dagaal ay sii noolaadaan in ka badan markab kasta oo dagaal oo ku jira nidaamka xiddigga ee sii yaraanaya. Qaabka Qabsashada Territory, kooxaha waxay ku dhibtoonayaan inay qabsadaan dhibcaha istiraatiijiga ah ee khariidada iyagoo ka difaacaya cadowga. Qaabka godoominta, ciyaartoydu waxay la kaashadaan asxaabtooda si ay u xakameeyaan khariidada una ururiyaan ciidamo aad u tiro badan si ay uga caawiyaan dagaalka.
BATTLESHIP APOLLO waxay fududeyneysaa oo sii qoto-dheeraysaa khibradda istiraatiijiyadeed ee waqtiga-dhabta ah ee xeerarka iyo cutubyada madadaalada ah ee ay fududahay in la barto laakiin ay adag tahay in lagu barto hababka cayaaraha ee soo kordhaya. Waxay dhacdaa 200 sano ka dib dhacdooyinkii guusha MMO ee Hades Star.
Lix dayax -gacmeed, mid kasta oo leh awood iyo daciifnimo kala duwan oo u baahan habab xeeladeed oo kala duwan
In ka badan labaatan qaybood oo ah dagaalyahannada taageerada iyo maraakiibta weerarka iyo difaaca labadaba
Maraakiibta dagaalka ee la habeyn karo si loo abuuro maaliyad dhab ah oo gaar ah oo ka dhex muuqata kumanaan ciyaartoy dhab ah
Shirkaduhu waxay u oggolaadaan ciyaartoydu inay abaabulaan si ay u wadaagaan aqoonta oo ay u sameeyaan kooxo si fiican ugu diyaargaroobay dagaal-yahanno badan.
Hababka ciyaarta badan ee kala duwan ee ciyaartoy tartan iyo iskaashi leh
BATTLESHIP APOLLO Noocyada
Horumar: Parallel Space Inc
BATTLESHIP APOLLO waa ciyaar kombuyuutar cilmiyaysan oo PC ah oo ku dhex gelisa ciyaartoy dagaal...
Minecraft waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan muddooyinkii ugu dambeeyay. Ciyaarta, oo ay xiise...
SMITE waxay siisaa cayaartoyda ciyaar MOBA ah. Nooca MOBA ee ku bilaabmay Dota wuxuu caan ku noqday...
Zombies la yaab leh oo qosol leh oo isku dayaya inay la wareegaan adduunka ayaa isku dayaya inay...
Age Of Empires 2, oo u suurtagashay inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna cayaaraha...
HUMANKIND waa ciyaar istiraatiijiyad taariikhi ah oo aad isku dari doontid dhaqamada oo aad dib ugu...
Anno 1800 waxaa loo sii daayay ciyaar istiraatiijiyad ah. Anno 1800 waa nooca 2019 ee ciyaarta...
Isku dhaca Irons waa ciyaar taangi waqtiga-dhabta ah oo ay ku jiraan waxyaabo door door-ciyaar ah...
Shilka Sixirku waa ciyaar ku dhisan guji ku saleysan 3D door-ciyaar ciyaar kumbuyuutarrada Windows...
Crusader Kings 3 waa ciyaar istaraatiijiyadeed oo ay soo saartay Studio Development Paradox....
Warhammer 40,000: Battlesector waa orod xawaare ku socda, istiraatiijiyad isweydaarsi ku dhisan oo...
Dada Boqortooyooyinka 3: Daabacaadda Qeexiddu waa mid ka mid ah cayaaraha istiraatiijiyadeed ee...